Ogaden News Agency (ONA) – Safiirka Maraykanka Ufadhiya Itoobiya oo ka Hadlay Xaalada Itoobiya.
Safiirka Maraykanka Ufadhiya Itoobiya oo ka Hadlay Xaalada Itoobiya.
Danjiraha Maraykanka u fadhiya Gumaysiga Itoobiya ayaa waraysi uu siiyay Wargayska Addis Standard kaga hadlay xaalada Itoobiya iyo isbadalada kasocda, safiirka ayaa sheegaya in uu soo dhawaynayo isbadalada dhinaca fiican loo qaday ee kasocda Itoobiya isbadalka ayuu sabab uga dhigay iscasilaadii Raysalwasaarihii hore ee Itoobiya iyo doorashada Abiye Axmed.
Mar wax laga waydiiyay bal inay iyagu lug ku lahaayeen isbadal aan horay looga baranin ee Itoobiya kadhacay ayaa waxuu yidhi isbadalka waxaa keenay shacabka Itoobiya anaguna qaybtii nagaga aadanayd ayaanka qaadanay.
Waxaa kaloo waxlaga waydiyay nabada iyo waan waanta ka dhex bilaabatay Itoobiya iyo Eritrea waxa uuna sheegay inay Maraykanku danaynayaan nabad waarta oo ka dhex dhalata Itoobiya iyo Eritrea. Sidoo kale waxaa la waydiiyay heshiiska DP World lagashay Itoobiya iyo maamulka waqooyi ee somaliland ee ku saabsanaa dekada Berbera waxa uuna sheegay inay Itoobiya u madaxbanaan tahay cida ay xidhiidh la yeelanayaan.
Waxa uu sheegay inay Itoobiya ka badbaaday fawdo iyo isku dhaxyaac aan aad uga cabsi qabnay, Abiye Axmed ayuu ku tilmaamay nin shacabka kasoo dhex baxay Mid dhagaysta oo ku shaqeeya aragtida dhalinyarada Itoobiya ee Isbadal doonka ah.
Waxa uu sheegay in isbadalka Itoobiya kasocda yahay mid mucjiso ah lix biloodka ka hor aan la moodaynin inuu waxani dhici doono Waxa uu ka gaabsaday su’aalo badan oo ay kamid ahaayeen bal inay Itoobiya dalbatay soo dhiibista Qurba joogta Itoobiya ee kunool dalka Maraykanka kuwaas oo kashaqayn jiray kicinta shacabka kunool gudaha Itoobiya.